Muujinta fikirka xorta ah - xuquuqda aadanaha & farshaxanka fudud by PixelHELPER Foundation
ra'yiga lacag la'aanta ah
Waxaan u dagaalameynaa Raif Badawi & Julian Assange!
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 18. January 2019
Raif Badawi waa in laga siidaayaa xabsiga. Isla markiiba!
PixelHELPER iyo London African Gospel Chor ayaa u sameynaya "Wax gudaha ka jira oo aad u xoog badan" oo loogu talagalay Julian Assange hortiisa xabsiga Belmarsh
cafiska boqortooyada ee Julian Assange oo ka yimid boqoradda
Cafiska Julian Assange iyo Edward Snowden ee Donald Trump
Thanks to #Wikileaks iyo Stella Moris
Angela Merkel ayaa dalbatay magangalyo siyaasadeed iyo in la cafiyo Julian Assange
Qiyaasta iftiinka safaaradda Mareykanka ee Berlin
Ha weydiinin waxa uu waddanku kuu sameyn karo, dheh waxaad u qaban karto Assange, wax ka beddelka hadalkii taariikhiga ahaa ee John F. Kennedy wuxuu iftiimiyay safaaradda Mareykanka ee Berlin. Mareykanka oo si joogto ah u sameeya dambiyo dagaal, kana soo jeeda kooxdii dagaalkii Vietnam ee dilay boqolaal kun oo dhibanayaal ah saxafiyiintii lagu dilay dagaalka Ciraaq, waa inay kala noqdaan codsiyadooda wareejinta.
Samee qoraal ku saabsan maalinta xigta ee dhageysiga; 25.02. waa taariikhda maxkamadaynta ee loo musaafurinayo Mareykanka.
Oo maxaa yeelay runtu sirta ayaa loo xafiday muddo dheer mana jirto dawlad wax kaashaneysa Julian, Ingiriisiga ayaa hubaal ah in loo gacan gelin doono Mareykanka. Taasi waa sababta aan bishaan u bilaabi doonno in aan wax uga qabanno safaaradaha Mareykanka ee dibedda, Aqalka Cad iyo dhismayaasha kale ee Mareykanka ee dibedda iyagoo wata mudaaharaadyo fudud iyo jahwareer farshaxanimo.
Ku tabaruc hadda si ay tan suurtogal u noqoto, ha noqoto 333 euro ama 5 euro, qaddar yar ayaa caawiya! Wax u sameyso tayada macluumaadka berrito, oo ku saleysan taas oo ay tahay inaad go'aanno gaarto!
Boqoradda waa inay cafiyaysaa Julian Assange
Haddii helitaanka & faafinta farriimaha qarsoodiga ah ee qiimaha bulshada ku fadhiya ay noqdaan fal dambiyeed, maxaa kale oo ay warbaahintu soo gudbin kartaa? Maxaa yeelay waxa lagu kala saaraa iyo waxa qarsoon waxaa go’aamiya dowladda.
Ku xadgudubka awooda Mareykanka ee ka dhanka ah #Assange waa wax cajiib ah: Wuxuu si xun ugu bukooday xabsiga ugu badan ee nabadgelyada, una dhow geeri. Ku alla kii khaafiya qof indha-indheeya wuxuu badbaadiyaa xorriyadda! Snowden sidoo kale wuxuu sii wadaa inuu fadhiisto Moscow sababtoo ah dhammaan wadamada reer galbeedka waxay ka baqayaan aargudashada Mareykanka.
@Wikileaks wuxuu cadaw u ahaa maamulka Mareykanka ilaa iyo sanadkii 2010. Waxaan dalbaneynaa in si deg deg ah looga sii daayo #JulianAssange laga soo bilaabo xadhigiisii ​​London. Boqoradda waa inay si deg deg ah u cafisaa oo ay siisaa magangalyo siyaasadeed.
Saadaasha fudud ee safaaradda Boqortooyada Ingiriiska
Ololeyaal duug ah oo loogu talagalay maxaabiista kale ee siyaasadeed
Amarka xirista yurubka ah waa in aan loo isticmaalin in lagu xukumo kuwa ka soo horjeeda siyaasadda. Garsoorka Jarmalka wuxuu leeyahay sabab wanaagsan oo aan loo dhiibin Carles Puigdemont Spain. Sharciga denbiyada ayaa dib loo soo celiyay iyadoo la adeegsanayo isku dhac mideeyey iyo cadaadis siyaasadeed oo ka soo horjeeda siyaasadda si khalad ah. Garsoorka Jarmalka waa inuusan ka qeyb galin khilaafka siyaasadeed ee Spain, oo aan ka yareyn, khibrad taariikheed oo xanuun leh oo ku saabsan ciqaabta siyaasadeed, ma bixinayo wax difaac ah. Haddii ay oggolaato in dib loo celiyo, dib-u-celinta sharcigu way furan tahay, Catalan-na waxay ugu dambayntii racfaan u qaadan kartaa Maxkamadda Dastuuriga ah ee Federaalka. Ugu dambeyntii, xuquuqda shakhsiga waa in la siiyaa mudnaanta koorsooyinka awoodda ee Spain.
→ 10 Siyaasiyiinta Catalan ayaa xabsiga ku jira
1. Jordi Cuixart - 161 maalmood xabsi ah
2. Jordi Sàchez - 161 maalmood xabsi ah
3. Oriol Junqueras - 144 maalmood xabsi ah
4. Joaquim Forn - 144 maalmood xabsi ah
5. Dolors Bassa - Lagu soo xiray mar labaad ka hor 3
6. Raula Romeva - xabsiga la dhigay markii labaad ka hor 3 maalmood
7. Jordi Turull - oo la xiray markii labaad ka hor 3
8. Josep Rull - ayaa xabsiga dhigay sanadka labaad ka hor 3
9. Carme Forcadell - oo lagu xiray maalmo 3 ka hor
10. Carles Puigdemont - xabsi 3 maalmood ka hor
→ Intaas waxaa sii dheer, siyaasiyiinta soo socda ayaa laguugu hanjabay xabsi waxayna hadda ku nool yihiin dibad-bax:
[gallery_bank type = ”images” format = ”masonry” title = ”true” desc = ”false” responsive = ”true” display = ”xushay” no_of_images = ”17 ″ sort_by =” random ”animation_effect =” bounce ”album_title =” run "album_id =" 21 ″]
Hel cadaadis & fiiro gaar ah - na taageer hadda! Deeq bixiye ahaan, waxaad kaalin wax ku ool ah ka geysaneysaa kicinta xanaaqa dadweynaha - adduun ka wanaagsan. Hada si rasmi ah u hel oo fadeexad xuduuda ka suurta gal. Meel kale oo aad ka hesho jabhad iyo kacdoon intaa le’eg euro kasta oo lagu deeqo sida annaga oo kale. Fadlan booqo degelkeenna: PixelHELPER.org/Shahar ama taageer qaadhaan ururinta Facebook:
Riix sawir qaade: Dirk-Martin Heimzelmann
Farshaxan fudud: Xubin ka mid ah PixelHELPER
Xorriyadda #Puigdemont waxaa lagu xardhay xabsiga Stasi ee magaalada Berlin. Waxaan ka mudaaharaadeynaa sida sharci darada ah, # Stasi-lamid ah xariga siyaasiyiinta Catalan ee Spain.Waxaan codsaneynaa in si deg deg ah loo siidaayo dhamaan maxaabiista siyaasadeed ee Spain. #PixelHELPER waxay ugu baaqeysaa dowlada federaalka inay si deg deg ah u cadeyso in Jarmalka uusan siyaasad ahaan ogolaan doonin dhiibista. Ansixinta noocan oo kale ah ee siyaasadeed ee codsiga Isbaanishka ee ku saabsan kaalmada sharciga ee labada dhinac waa lagama maarmaan marka loo eego qawaaniinta Sharciga Caawinta Sharciga Caalamiga ah ee Wadaagga ah - iyadoon loo eegin go'aanka sharci ee maxkamadda. Marka la eego muhiimada dacwada, hey'ada wax bixineysa waa dowlada federaalka qaab wasiirka cadaalada Katarina Barley. Waxaan ka codsaneynaa dowladda federaalka inay hubiso in Carles Puigdemont si deg deg ah looga sii daayo xabsiga Jarmalka!
Hel cadaadis & fiiro gaar ah - na taageer hadda! Deeq bixiye ahaan, waxaad kaalin wax ku ool ah ka geysaneysaa kicinta xanaaqa dadweynaha - adduun ka wanaagsan. Hada si rasmi ah u hel oo fadeexad xuduuda ka suurta gal. Meel kale oo aad ka hesho jabhad iyo kacdoon intaa le’eg euro kasta oo lagu deeqo sida annaga oo kale. Fadlan booqo degelkeenna: PixelHELPER.org/Spenden ama taageer qaadhaan ururinta Facebook: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
Carabta Carabtu waxay ahayd inay soo qaadaan furfurnaanta waxayna bilaabaan waqti cusub oo dimuqraadiyad ah. Laakiin mudaaharaadka maalmahaasi hadda waa maxaabiis siyaasadeed. Dadka ayaa risikiert in aad noloshaada ku saabsan baaxadda xoriyadda saxaafadda ee Amnesty International ee Maraykanka waxaa lagu calaamadeeyay in madow, ayaa iminka ku jira xabsiga oo la illoobi by dunida. PixelHELPER waxay rabtaa inay halkaa farageliso ayna xoreeyso maxaabiista siyaasadeed.
tallaabo hore ku soo dejin doonaa dadka 13 fadhiya March 2011 in xabsiga dib ugu nuurka. The "Bahrain 13" ayaa la xiray kadib markii ay rabshado of February 2011 magaalada Bahrain Manana, in ay shilalka eedayntii ee shirqool dowladda. Dowlado iyo ururo badan, oo ay ku jiraan Amnesty International iyo Human Rights Watch, waxay sii wadaan in ay tilmaamaan jirdil. Maxaabiista ayaa si muuqata loo cidhib tiray.
Welwelku sidoo kale ma joojiyo qoysaska. Maxaabiistaan ​​siyaasadeed ayaa weli ku jira xabsiga maanta, iyaga oo adeegaya 5 oo ka mid ah jumlado nololeed ilaa jumlado badan oo nolosha ah. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu sheego fikirkooda. Ha iloobin dadka wanaagsan ee naftooda u huray si ay u keenaan dimuqraadiyad iyo nabad dad badan.
Waxaan u dagaalameynaa Raif Badawi & Julian Assange! Febraayo 6th, 2021Oliver Bienkowski
Maqaalkeenna aan faa'iido doon ahayn ma sameyn karo adiga oo aan kudeeqeynin ?????????????????? ?????????